Ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị adị na mgbasa ozi n'ịntanetị + akara ngosi isi | Martech Zone
Ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị adị na mgbasa ozi n'ịntanetị + akara ngosi akara
Monday, April 7, 2008 Monday, December 19, 2016 Douglas Karr
AhịaSherpa's 2008 Mgbasa ozi n'ịntanetị na Benchmark Guide + Benchmarks amụrụ site na nkwenkwe na adverting online ugbu a na-aghọtahiekarị, na n'ihi ya, underutilized. Nke a abụghị ịsị na ndị mgbasa ozi dị ugbu a kwesịrị ịmụba mmefu na ntanetị. Kama nke ahụ, anyị chere na ndị na-akpọsa ngwa ahịa nwere ike ịchọta nguzozi n'etiti akụ na ụba, ịchebe nke ọma na ịchụ akụ, mkpọsa mgbasa ozi ga-enweta ROI ka mma maka onwe ha yana ahụmịhe dị mma n'ịntanetị maka ndị ahịa. Ọtụtụ ngwa ngwa na-adaba na mgbasa ozi n'ịntanetị, yabụ na nke a abụghị ọrụ dị mfe.
Ihe mgbochi mbụ, nke a ghaghị imeri, bụ na mgbakọ na mwepụ nke ụlọ akwụkwọ ochie na-adabere na njedebe nke ọdịnala, usoro, usoro mgbasa ozi analog, ọ naghị egosipụta ihe dị adị nke usoro mgbasa ozi na-enweghị usoro. N'ihi nke a, mgbakọ na mwepụ nke dijitalụ chọrọ ka ọfụma, na ịnakwere ya n'etiti ndị ọrụ mgbasa ozi. Otu n'ime ụzọ ndị doro anya iji gbakwunye ọkaibe na mgbasa ozi dijitalụ bụ iji nlezianya lelee ugboro ole. Omenala mgbasa ozi anaghị ekwe ka a na-achịkwa ugboro ole na ọkwa ọ bụla, mana dijitalụ na-eme ya. Iji mezuo nke ahụ, anyị nwetara data site na InsightExpress na-egosi otu ugboro si emetụta ọfụma mgbasa ozi, anyị lere anya na ngbanwe ntụgharị ọnụego site na ugboro ole ikpughere site na Doubleclick, wee kọwaa otu esi etinye usoro iwu mkpuchi ugboro ugboro nke nwere ezi uche maka atụmatụ mgbasa ozi ọ bụla.
Mmachi ọzọ nke usoro mgbasa ozi ọdịnala na mgbakọ na mwepụ bụ enweghị nchebara echiche maka ogo na ogo ndị ahịa ọ bụla. Site n'usoro ịzụ ahịa ọdịnala, ụfọdụ "ihe mkpofu" bụ ihe pụta ụwa ma sie ike ịkọ. Ndị na - akpọsa dijitalụ nwere ike bụrụ na ha na - ebupụta nzere na metric qualitative mgbe ha na - eme atụmatụ mgbasa ozi Nke a nwere ike were ọtụtụ ụdị, site na ịkpa oke agwa ka ekenye uru site na ịtụgharigha. Anyị na-egosipụta ụzọ esi ekenye ikike itinye ego site na ntinye anya, yana ịdị mma nke mgbasa ozi site na nyocha arụmọrụ nke mgbasa ozi. Isi okwu a bụ na ịgbakọ iru iru ụzọ nke ọma karịa ịbịaru ya kwesiri ịbụ ụkpụrụ na ntanetị dijitalụ.
Anyị echeghị na enwere mgbaka anwansi maka ịmepụta mgbasa ozi zuru oke, ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha mepụta ihe ma nwaa ihe ọhụrụ. Dabere na nyocha anyị, ọ bụ ndị mgbasa ozi na-anwale ihe ọhụrụ ma na-anwale ha mgbe niile na-eme nke ọma. Anyị na-agba ume nyocha na nnwale ma gosipụta ihe akaebe sitere na nyocha anyị na nyocha nke qualitative, nke na-emetụta nghọta ndị na-abanye na okike ad, nwere ike ịdị irè karịa site na ọnọdụ ROI karịa ịkwalite nsuso ma ọ bụ nyocha A / B.
Na mmechi, nyocha kwesiri ka odi nma na itinye usoro ihe eji eme nke oma. Site na imepụta ihe ntaneti nke mejuputara ma ihe eji emeputa ihe site na ihe nlele nke ihe nlere anya nke elere anya, elele metrics dika mmetuta na clicks, o kwere omume ndi ahia ka ha nweta ihe zuru oke nke ihe na eme na ntaneti. Enwere otutu data na ezughi oke nghọta ebe ahụ.
Anyị enweghị azịza niile, mana anyị nwere ọtụtụ n'ime ha, yana ebe anyị na-enweghị, anyị nwere olile anya ịnye mkparịta ụka, echiche ọhụrụ, na nnwale. Na-akpali mgbasa ozi n'ịntanetị site na ebe ọ bụ ruo ebe ọ ga - adị ga - abụ usoro nwayọ nwayọ, mana ọ bụ nke anyị na - atụ anya isonye.
Tags: 2008benchmarksahịa sherpa
Nweta mmụọ nsọ mana esoghi usoro ahụ
ProBlogger: Zụta otu akwụkwọ nke akwụkwọ Darren!
Apr 7, 2008 na 4: 52 PM
ọ gaghị eme. ọ dịghị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ media karịrị ọkọlọtọ mgbasa ozi. Ihe ọ bụla bụ SPAM. Nzọ kacha mma bụ itinye ngwaahịa na youtubes
Apr 7, 2008 na 11: 46 PM
M ugbu a na Ad Tech ogbako na Paris na isi ugboro ugboro isiokwu a bụ ihe atọ:
1. Ebumnuche ezubere - ọ bụ ezie na ọdịnaya na mma dị oke mkpa, ịmara omume nke ndị na - agụ akwụkwọ gị dị mkpa karịa. Ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'arentanet bụ nhọrọ doro anya naanị n'ihi na ha na-echekwa ọtụtụ ozi gbasara ndị ọrụ ha. Agbanyeghị, ka oge na-aga na saịtị ọdịnaya dị mma na-eme ka ndị na-agụ ha dabere na ndị debanyere aha ma ọdịnaya ahụ bụ n'efu ma ọ bụ adịchaghị, saịtị ndị a ga-abụ ebe kachasị mma maka mgbasa ozi n'ịntanetị. Ihe okike nke netwọọdụ blog nke Forbes 400 bu ihe akaebe banyere nke a.
2. Online Ad Wend - Michael Kleindl nke Wunderloop hotara na n'ime otu afọ site na ngụkọta pasent nke mgbasa ozi niile na-emefu, ma ọ bụ TV, redio, akwụkwọ akụkọ wdg, 10% ga-adị n'ịntanetị. Ya onwe ya chere na ọbụna 10% dị oke ala ma nwee uche na UK ga-adị nso na 50% n'ime otu afọ.
3. Dika igwe onyonyo dijital na-eto, mgbasa ozi TV n’etu na-etokwa. Ihe ọzọ buru ibu bụ mmụba na ọsọ ọsọ Internetntanetị. Fọdụ ụlọ ọrụ (aga m elele ndetu m) na-ekwe nkwa ọsọ ọsọ 100mb na ụlọ nkeonwe n'ime otu afọ. Ọ dị onye ọ bụla ga-ekiri eriri ma ọ bụ TV nke dabeere na ụwa ọzọ mgbe nke a mere? Ọ ga-abụ nnukwu asọmpi.
Dika Doug gosiputara, o gabu ihe banyere akuko na nyocha. Nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara netwọkụ mgbasa ozi ji etinye ego dị ukwuu na ndị ahịa ha, na-akọ teknụzụ.
Onwe m, ekwenyere m na e nweela ọtụtụ mmalite ụgha maka ịntanetị. Ekwenyere m na anyị na-enwe ya ugbu a maka mkpanaka. Agbanyeghị, n'agbanyeghị enweghị ọhụụ ugbu a maka mgbasa ozi mkpanaka dị mma, Internetntanetị ugbu a nwere ọgbọ dum nke ndị nwere oge mụta ihe site na mmejọ ndị gara aga wee mezie ya.
Apr 8, 2008 na 8: 09 AM
Nwere ike ịkele Tim site na Marketing Sherpa maka nnukwu ọkwa a - akpọrọ m ha ka ha mee ọkwa ọbịa ma ha etinye isiokwu pụtara ìhè! Nzaghachi gị pụtara ìhè.